तुइन प्रकरणः भारतलाई नेपालको पत्र, 'ढिलो गर्दा नेपाल चुक्यो' - Pardeshi Khabar
तुइन प्रकरणः भारतलाई नेपालको पत्र, ‘ढिलो गर्दा नेपाल चुक्यो’
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: September 7, 2021
भदौ २१, काठमाडौ ।
जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको र नेपाली आकाशमा “अनुमति विनै भारतीय हेलिकप्टर उडाइएको” विषयमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले भारतलाई दुई वटा छुट्टा-छुट्टै पत्र पठाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अधिकारीहरूका भनाइमा गृह मन्त्रालयले दुवै घटनाबारे जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि परराष्ट्रले भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको हो।
काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासमार्फत ती पत्र पठाइएको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टा-छुट्टै मितिमा भारतलाई त्यस्ता पत्र पठाइएको पुष्टि गरेको छ।
तर तुइन प्रकरणमा निकै ढिलो गरेर सरकारले कूटनीतिक पत्र पठाएको भन्दै त्यसलाई परराष्ट्र मामिलाका केही जानकारहरूले “कूटनीतिक रूपमा नेपाल चुकेको” बताएका छन्।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, “त्यो हाम्रो नियमित प्रक्रिया हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त रिपोर्टमा लेखिए बमोजिम हामीले आफ्नो कूटनीतिक च्यानलमार्फत पत्राचार गरिसकेका छौँ।”
परराष्ट्रका अधिकारीहरूले ती पत्रहरूमा उल्लेख गरिएका विवरणबारे औपचारिक रूपमा जानकारी दिन चाहेनन्।
यद्यपि उच्च सरकारी स्रोतलाई उल्लेख गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले जयसिंह धामी प्रकरणमा “भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) जिम्मेवार रहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको” लेखेका छन्।
ती सञ्चारमाध्यमहरूमा जनाइए अनुसार नेपालले घटनाको जाँच गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र धामीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा अनुमतिविना प्रवेश गरेको भन्दै त्यस्ता घटना नदोहोर्‍याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै परराष्ट्रले अर्को पत्र पनि पठाइएको बताइएको छ।
के भन्छन् पराराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू?
तुइन प्रकरणमा एक महिनाभन्दा बढी समयपछि बल्ल कूटनीतिक पत्र पठाइनुलाई विदेश मामिलाका जानकारहरूले “नेपालको कूटनीतिक कमजोरी” का रूपमा अर्थ्याएका छन्।
गत बिहीवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यसबारे सोधिएको प्रश्नलाई “आफूले सञ्चारमाध्यममा देखेको तर नेपालले औपचारिक रूपमा केही नभनेको” भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए।
नेपालले यसअघि विभिन्न विषयमा पठाएका यस्ता कैयौँ कूटनीतिक पत्रहरूको भारतले जवाफ नदिएको अवस्थामा यसपालिका पत्रको पनि जवाफ नदिन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले तुइन प्रकरणमा नेपालको कूटनीतिक त्रुटि देखिएको बताए।
उनका भनाइमा नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्ता कूटनीतिक त्रुटि बारम्बार दोहोरिन थालेका छन्।
पाण्डेले भने, “नेपालको परराष्ट्र सञ्चालनमा त्रुटिहरू बढ्दै गएका छन्। कूटनीतिमा असङ्गतिहरू देखा परिरहेका छन्। परिणामस्वरुप नेपाल आन्तरिक र वैदेशिक दुइटै क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ।”
“यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अहिले दार्चुलाको घटनाले दिएको छ। त्यो भन्दा अगाडि पनि पटक पटक यस्ता गल्तीहरू भएका छन्।”
नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझाउने विषय वा लिपुलेक तथा अन्य भू-भाग अतिक्रमण भएको विषयमा नेपालको कूटनीति सञ्चालनमा “शिथिलता” बढ्दै गएको देखिएको पाण्डेको भनाइ छ।
उनी “नेपालको राजनीतिमा विदेशीको चलखेल बढ्न थाल्नुको दुष्परिणाम”का रूपमा यस्तो अवस्था आएको ठान्छन्।
पाण्डे भन्छन्, “नेपालले कूटनैतिक नोट पठाएर, पत्र लेखेर, सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेर, भेटेको बेलामा फकाएर पनि किन वार्ता भइरहेको छैन? …. नेपाल यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेषगरी दुईवटा छिमेकीहरूले नेपाल सरकारलाई गम्भीरताका साथ लिन छाडेका छन्।”
कुनै पनि देशमा यस्तो अवस्था आउँदा त्यसको दुष्परिणामले “इतिहास र भूगोल दुवैलाई असजिलोमा पार्ने” उनको भनाइ छ।
‘नेपाल चुकेकै हो’
भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय तुइन प्रकरणमा नेपाल पछि परेको ठान्छन्।
उनले भने, “यसमा हामी अलिकति चुकेकै हौँ किनभने तत्काल ध्यानाकर्षण गर्नुपर्थ्यो। नोट त अझ पछिल्लो कुरा हो।”
“भारतीय राजदूतलाई पराराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर तत्कालै ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ। नेपाली राजदूतावासलाई परराष्ट्रबाट त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा नेपालको चासो राख्न भन्न सकिन्छ।”
“त्यो नगरेको कारणले गर्दा भारतले मौकाको फाइदा उठायो। अस्ति प्रवक्ताले भने नि त! ‘सञ्चारमाध्यममा चाहिँ देखियो तर आधिकारिक रूपमा सूचना हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ’ भने।”
उनी सरकारले कूटनीतिक नोट पठाए पनि त्यसलाई बेवास्ता पनि गर्नसक्ने ठान्छन्।
उपाध्याय कूटनीतिमा “प्राथमिकता र निरन्तरता” हुनुपर्ने तर त्यस्तो नहुँदा नेपालले पहिले पठाएका कतिपय यस्तै कूटनीतिक पत्रलाई भारतले बेवास्ता गरेको बताउँछन्।
“हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो र निरन्तर त्यसलाई फलो गर्नुपर्‍यो अनि मात्र कूटनीतिमा सफलता प्राप्त हुन्छ किनभने भारतलाई त फरक पर्दैन नि नेपाललाई त फरक पर्छ उसलाई त यो घटनाको बारेमा सामसुम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै हुन्छ।”
तर दबाब बढ्दै गएपछि भारतले पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले उक्त विषयलाई बारम्बार पछ्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल चाहिँ “भारतले नेपालबाट जे विषयमा पनि गुनासो आएको” भन्ठानेर पनि कूटनीतिक पत्रको जवाफ नदिएको हुनसक्ने ठान्छन्।
उनी तुइन प्रकरणमा सीमा क्षेत्रमा बनेका दुई देश बीचका संयुक्त संयन्त्रबीच निरन्तर सम्पर्क भइरहेको भए समस्या सहजै समाधान हुनसक्थ्यो भन्ने ठान्छन्।
उनले भने, “स्थानीय तहमा सम्पर्क बढ्यो भने यस्ता कुरा समाधान गर्न सहज हुन्छ।”
तर सबै कुरालाई काठमाण्डू र दिल्लीबाट मात्र समाधान खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
कूटनीतिक पत्रलाई बेवास्ता गर्दै भारत
यसअघि पनि नेपालले भारतलाई सीमा विवादलगायतका विषयमा पठाएका कूटनीतिक पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपालले पछिल्लो समय भारतले नेपाली भू-भाग समेटेर नक्सा बनाएको भन्दै कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो।
त्यस्तै कालापानी क्षेत्र हुँदै बनेको सडक भारतले उद्घाटन गरेपछि पनि पत्र पठाएको थियो।
त्यसअघि भारत र चीनले त्रिदेशीय विन्दुलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेपछि नेपालले कूटनीतिक पत्र पठाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
भारतले ती सबै पत्रको जवाफ नदिएको बताइएको छ।
कान्तिपुर दैनिकले गत साता प्रकाशित गरेको एउटा समाचार अनुसार विगत १८ महिनामा नेपालले पठाएका चारवटा कूटनीतिक पत्रको भारतले जवाफ फर्काएको छैन। बिबिसी नेपालीबाट
« प्रवास विषेश प्रादेशिक समितिको सुज अभियान भर्चुअल मार्फत सेप्टेम्बर १२मा हुँदै (Previous News)
(Next News) पहिलो ओडीआईमा पपुवा न्यु गिनीमाथि नेपाल २ विकेटले विजयी »